Tenga 100% Natural Keratin Collagen Silk Powder Yekugadzirisa Bvudzi - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
100% Natural Keratin Collagen Silk Powder Yekugadzirisa Bvudzi
100% Natural Keratin Collagen Silk Powder Yekugadzirisa Bvudzi yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Rezinesi rekugadzira: XK-985455
Item Rudzi: Bvudzi Rinorasika Chigadzirwa
Kudya: Kugadzirisa Bvudzi
Muenzaniso Nhamba: H78538
Maitiro: Bvudzi, chigadziriso chebvudzi, Kuchengeta Musoro
Sowsmile Powder isina zvinowedzera haina kana zvimwe zvinowedzera uye inosanganisira collagen uye keratin, protein yesirika, Amino acid, nezvimwewo sechigadzirwa chisina njodzi.
Inopa 100% protein Keratin ndechimwe chezvinhu zvine bvudzi rinoshanda pane chakakuvadzwa chikamu uye chinobatsira kuchengetedza kusimba kwebvudzi.
Collagen inoshanda sebhiriji rinobatanidza mapuroteni ebvudzi, ichipa zvinovaka muviri kune zvikamu zvakakanganisika, uye kugadzira vhudzi kugwinya.
sirika protein, Amino acid inogona kurega bvudzi riwedzere kusimba, riine hutano
Inodzivirira kukuvara kwebvudzi / Inowedzera kushanda kwekiriniki Inodzivirira bvudzi kubva mukukuvara kana uchifamba nenzira dzemakemikari senge perm kana kudhaya, uye inowedzera maitiro emakiriniki paanoshandiswa nechigadzirwa chekiriniki.
kana bvudzi rekutarisira kana mushure mekugeza bvudzi, tora sowsmile powder (About 3-5g) uye yakasanganiswa ne conditioner kana yakasanganiswa nesowsmile Zadza-UP mafuta ekuchengetedza bvudzi.
Iwe unogona zvakare kuishandisa kana Perm bvudzi, yakavhenganiswa sowsmile upfu nemafungu anogara (unofanirwa kurega hupfu hwanyungudika mariri).
Iwe unogona zvakare kuwedzera sowsmile powder kune shampoo kana mvura, woishandisa kugeza bvudzi. (inofanira kurega hupfu hwakanyungudutswa mariri).
Hazvina mhosva kuti ndeipi nzira, iwe unofanirwa kurega iyo sowsmile upfu yakanyungudutswa zvizere! ipapo inogona kupa hutano hwakazara kune vhudzi!
1bag bvudzi rekuchengetedza poda (20g)
ayo akanaka uye basa rinoita hiar nyoro
Mazuva makumi matatu ekusvika kuCalifornia
Bhuka mumazuva gumi nemashanu. Kwete kuyedzwa izvozvi. Ini ndinosiya komendi.
Ini handisati ndambozviedza asi zvinotaridzika zvakanaka.